Koofiyadda Bannaanka, Koofiyadda Wadada, Koofiyadaha Baaskiilka, Koofiyadaha Baaskiilka - Aad u Muhiim ah
Qalabka Warshadaha Sare
ABB 6-aixs robot, qalabka Kurtz EPS iyo tas-hiilaadka baaritaanka Cadex. Kheyraadka waxsoosaarka oo isku dhafan.
U Dhis si aad u Dalbatid iyo Wax-soo-Saarka-Waqtiga keliya. FAI, SOP iyo qorshaha xakamaynta hannaanka si loo hubiyo gudbinta ugu horreysa ee soosaarida tayada sare.
Macaamiil u janjeedha, filasho ka sarreysa. Xal-u-helidda koofiyad heer sare ah.
Aaminaad iyo khibrad khibrad leh oo loogu talagalay R & D teay.
Fariin otomaatig ah oo biriijka biriijka tooska ah iftiinka nalka ...
Fikrad horumarsan iyo hal-abuurnimo
Diyaar u ah in la sahamiyo fikrad cusub, naqshad hal abuur leh, qalab cusub iyo habka. Ka fakarka sanduuqa, dadaal aan daalin.
Tas-hiilaad heer sare ah iyo shaybaarka baaritaanka ee iskaa ah
Xullo qalabka soosaarka koofiyada-fasalka ugu fiican. Qalabka Imtixaanka Cadex ee la soo dejiyey ee la soo dejiyey ee ay ka hawl gasho farsamo yaqaan takhasus leh ayaa awood u leh inuu sameeyo dhammaan koofiyadaha caadiga ah ee baaritaanka gudaha.
Horumarinta koofiyadda & Soosaarka casriga ah
Ku habee koofiyad caqli-gal ah adigoo isticmaalaya iskudhaf aan kala go lahayn lahayn oo 'LED' iyo 'APP' ah Bixi calaamadda leexinta, Nalka Biriigga, Bluetooth, GPS, Kaamiro, iwm. taasoo horseed u ah isbeddel koofiyad caqli badan oo leh shaqeysi habboon.
Jawaab leh oo wax ku ool ah
Kharash-ku-ool iyo gaarsiin degdeg ah
Dhammaan qaybaha aan iibinno waa la caddeeyay
Febraayo 03, 2021